28.11 Rava Babylona
Anio Alatsinainy 28 Novambra 2016 dia ny Apokalypsy 18.1-24, no teny hovakiantsika ary hojerentsika ao anatin'izany ny hoe inona no fahamarinana asehon'ny teny novakiana ?
1 Rehefa afaka izany, dia hitako fa, indro, nisy anjely iray koa nidina avy tany an-danitra, nanana fahefana lehibe; ary ny tany nohazavain’ny voninahiny.
2 Ary niantso tamin’ny feo mahery izy ka nanao hoe : Rava ! rava Babylona lehibe ! ka tonga fonenan’ny demonia sy fieren’[Gr. trano-maizina] ny fanahy maloto rehetra ary akanin’[Gr. trano-maizina] ny vorona rehetra izay maloto sy ankahalaina.
3 Fa tamin’ ny divain’ny fahatezerana noho ny fijangajangany no nahalavoan’[Na : (nisotrohan’)] ny firenena rehetra, ary ny mpanjakan’ny tany nijangajanga taminy, ary ny mpandranto amin’ny tany tonga mpanankarena noho ny hafatratrin'ny nitiavan’io ny zava-mahafinaritra ny tena.
4 Ary nahare feo iray koa avy tany an-danitra aho nanao hoe : Mialà aminy hianareo, ry oloko, mba tsy hiombonanareo ota aminy, ary mba tsy hisy hahazo anareo ny loza manjò azy.
5 Fa ny fahotany efa nitehika tamin’ny lanitra, ary Andriamanitra efa nahatsiaro ny ratsy nataony.
7 Toraka izay niderany tena sy nivelomany tamin’ny zava-mahafinaritra ny tena, dia omeo fanaintainana sy alahelo toraka izany koa izy, satria hoy izy anakam-pò : Mipetraka ho mpanjakavavy aho, fa tsy mpitondra-tena, ary tsy mba hahita alahelo mihitsy aho;
8 koa noho izany dia ho tonga indray andro monja izao loza hanjo azy izao, dia fahafatesana sy fisaonana ary mosary, ary ho levon’ny afo izy; fa mahery ny Tompo Andriamanitra, Izay nitsara azy.
9 Ary ny mpanjakan’ny tany, izay nijangajanga taminy sy niara-nanaram-pò taminy tamin’ny zava-mahafinaritra ny tena, dia hiteha-tratra sy hitomany azy, raha mahita ny setrokin'ny fandoroana azy;
10 eny, hijanona eny lavitra eny izy noho ny fahatahorana ny fanaintainany ka hanao hoe : Indrisy ! indrisy ! Babylona, ilay tanàna lehibe ! ry ilay tanàna mafy ! fa tamin’ny ora iray monja dia tonga ny fitsarana anao.
11 Ary ny mpandranto amin’ny tany dia hitomany sy hisaona azy; fa tsy hisy mpividy intsony ny entany :
13 sy havozomamy sy zavatra mani-pofona [Gr. amoma]sy ditin-kazo sy menaka manitra sy ditin-kazo mani-pofona [lebona : izahao Eks. xxx. 34] , sy divay sy diloilo sy lafarina tsara toto sy vary tritika sy omby sy ondry sy soavaly sy kalesy ary tena sy ain’olona.
14 Ary ny vokatra soa [Na: voan-kazo] nirin’ny fanahinao dia efa niala taminao, ary ny zava-tsoa rehetra sy ny zava-malaza rehetra dia efa levona tsy ho anao, ary tsy ho hita intsony mandrakizay ireo.
16 ary hanao hoe : Indrisy ! indrisy ! ilay tanàna lehibe, izay nitafy rongony fotsy madinika sy lamba volomparasy sy jaky ary niravaka volamena sy vato soa ary perila !
17 Fa tamin’ny ora iray monja no nahafoana ny harena be toy izany. Ary ny mpitondra sambo rehetra sy izay rehetra mandeha eny ambonin’ny ranomasina sy ny matilo ary izay rehetra manao raharaha any an-dranomasina dia nijanona teny lavitra eny,
18 ary raha nahita ny setroky ny fandoroana azy, dia niantso nanao hoe : Aiza intsony re no misy tahaka izany tanàna lehibe izany ?
19 Ary nanopy vovoka hiraraka tamin’ny lohany izy, dia niantso sady nitomany sy nisaona ka nanao hoe : Indrisy ! indrisy ! ilay tanàna lehibe, izay nampanan-karena izay rehetra manan-tsambo eny amin’ny ranomasina noho ny zava-tsaro-bidy tao aminy; fa tamin’ny ora iray monja no nahafoana izany.
21 Ary nisy anjely mahery anankiray nibata vato tahaka ny vato lehibe fikosoham-bary, dia nanipy izany tany an-dranomasina ka nanao hoe : Hatsipy mafy toy izany no ho fandrava an’i Babylona, ilay tanàna lehibe, ka tsy ho hita intsony izy.
22 Ary ny feon’ny mpitendry lokanga sy ny mpitsoka mozika sy ny mpitsoka sodina ary ny mpitsoka trompetra dia tsy ho re eo aminao intsony; ary ny mpiasa rehetra mahay zavatra na inona na inona tsy ho hita eo aminao intsony; ary ny feon’ny vato fikosoham-bary tsy ho re eo aminao intsony;
23 ary ny fahazavan’ny jiro tsy mba hahazava eo aminao intsony; ary ny feon’ny mpampakatra sy ny ampakarina tsy ho re eo aminao intsony; fa lehiben’ny tany ny mpandrantonao; fa ny ody ratsinao no nentinao namitaka ny firenena rehetra.
24 Ary teo anatiny no nahitana ny ràn’ny mpaminany sy ny olona masina sy izay rehetra novonoina teny ambonin’ny tany.
Rehefa avy namaky sy nandinika ary namakafaka an'io teny novakiana io ianao dia toa izao ny fanazavana omen'ny Mpiara-Mamaky ny Baiboly.
Ilay vehivavy janga notsaraina teo aloha ihany ve itý lazainy hoe Babylona lehibe itý.
Endrika roa samihafa isehoan’ny fahavalon’Andriamanitra sy ny heviny io.
Jereo fa misy zavatra mitovitovy mihitsy ny ataony.
Ny Babylona rahateo dia haintsika fa manana fototra any amin’ny Testamenta taloha izany : voalohany i Babela (ilay nanao tilikambo hanakatra ny lanitra, maninana an’Andriamanitra) fa ilay faharoa koa dia ilay fahavalo nitondra ny vahoakan’Andriamanitra.
Anarana mifono zava-dalina : maro no hevi-teny nampiasana hamantarana azy io.
Fa ny azo asongadina eto dia manambara rafi-pitondrana ara-pivavahana mifangaro ara-politika ka manam-pahefana amin’ny fanjakana misy eto an-tany.
Azo faritana koa Fanjakana ara-pivavahana iray izay manana Renivohitra ka io no lazaina hoe Babylona.
Zava-mahafinaritra ny tena (3b, 5b).
Fakampanahy be ho antsika mpino io.
I Paoly dia niteny hoe any am-parany any ny olona dia ho tia fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an’Andriamanitra.
Any am-piangonana na eo anivon’ny fikambanana dia misy ny olona izay maka tsirony amin’ny fifalian’ny fiderana fa tsy mankamamy Ilay Andriamanitra deraina.
Ny ambiansa no mahatamana fa raha ny vavaka sy ny Tenin’Andriamanitra dia tsy mahaliana mihitsy.
"Mialà aminy hianareo, ry oloko…." :
Misaraka amin’ny fomba fiaina toy izany no iantsoan’ny Tenin’Andriamanitra antsika mpino.
Aiza ho aiza ny fahamasinanao ?
Mafy ny fitsaran’Andriamanitra.
Mafy ny fitsaran’Andriamanitra an’i Babylona satria nampifangaroharo ny fahamarinan’Andriamanitra amin’ny fitiavana ny rehak’izao tontolo izao : io no lazaina hoe "fijangajangana" eto (Romana 8.6-8; Jakoba 4.4; 1Jaona 3.15-17).
Sahia manana fiainana Kristiana miavaka amin’ny fahatsarany.
Hamaranantsika ity Mana androany ity dia hivavaka ho an'ny Fampianarana sy ny Fanabeazana eto amin'ny Fikambanana Mpiara-Mamaky ny Baiboly isika.